April 2011 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on April 22, 2011 April 22, 2011 by kyawkyawoo
The Mercy of Allah in Regard to Forgiveness ( Source Islamic Ways) “O son of Adam, as long as you… Read more Repentance and asking for forgiveness Astaghfirullah – الحديث القدسي
Posted on April 18, 2011 April 20, 2011 by kyawkyawoo
Above photo shows the victims of Mexican drug war. The caption of the photo from Big Pictures blog said that … Read more Why Allah created mankind?
Posted on April 11, 2011 April 11, 2011 by kyawkyawoo
အင်တာနက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် Islam ဘာသာဝင် များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘာသာရေးသုတ ရှာဖွေရာနေရာဖြစ်သလို အဖျက်အင်အားစုများရဲ့ ဘာသာရေးထောင်ချောက်များလဲရှိတယ်ဆိုတာအများစုသိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အထူးသတိပြုရန် နေရာများမှာ မိုနာဖစ် လို့ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့သာသနာ့ အရေခြုံ web sites များဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓတ်စစ်ဆင်ရေးနည်းဗျူဟာ ဥပမာပေးရရင် လပေါ်ကို ပထမဦးစွာခြေချ… Read more အင်တာနက်ပေါ်မှဘာသာဖျက်ထောင်ချောက်များ
Posted on April 8, 2011 April 11, 2011 by kyawkyawoo
အာရပ်ဘာသာစကားကိုမတတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျွန်တော့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာအလွယ်တကူဖတ်နိုင်တဲ့ ဟာရွန်ယာယာရဲ့ ဝက်ဆိုဒ် ဟာ ရွှေအိုးတလုံးရသလိုပါဘဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်ကအချိန်က အင်တာနက် ပေါ်မှာအဂ်လိပ်လို ဖတ်လို့ရတဲ့Islamicဆိုဒ် အလွန်နည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူ့ရဲ့စာအရေးအသားကိုနှစ်သက်တဲ့အပြင်သိပံ္ပသမားပီပီ ဒါဝင်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို အဓိကဦးစားပေးပြီ့း ဖန်ဆင်းရှင်ရှိကြောင်း အကျိုးအကြောင်းသင့် တုံ့ပြန်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်လို့မဝနိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်လဲ… Read more ညဏ်သတိနဲ့အမှန်တရားရှာဖွေကြပါ